Eufy RoboVac G20 Hybrid သတိပညာနှင့် ထိရောက်သော သန့်ရှင်းရေး [သုံးသပ်ချက်] | သတင်း ဂက်ဂျက်များ
Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် | 15/03/2022 13:36 | ယေဘုယျ, reviews
Eufy ချိတ်ဆက်ထားသော၊ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် အိမ်တွင် ဆက်လက်လောင်းကြေးထပ်နေပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ များသောအားဖြင့် TikTok တွင် ဗီဒီယိုအများအပြားတွင် သရုပ်ဆောင်သည့် အဆိုပါ သေးငယ်ပြီး အဝိုင်းစက်စက်ရုပ်များအကြောင်း ပြောပြရမည်ဖြစ်ပြီး၊ များသောအားဖြင့် ကြောင်ကဲ့သို့သော အခြားအိမ်ထောင်စုဝင်များက ၎င်းတို့ကို အထူးမကြိုက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဤအခါသမယတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စုပ်ယူမှုကောင်းပြီး လွယ်ကူသောပုံစံဖြင့် အလယ်အလတ်တန်းစားရှိ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည့် Eufy RoboVac G20 Hybrid အသစ်ကို နက်ရှိုင်းစွာ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပါသည်။ Eufy ကကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးဆောင်သောချိတ်ဆက်သန့်ရှင်းရေးကတ်တလောက်၏နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုနှင့်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်တကယ်တန်ဖိုးရှိပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ရှာဖွေပါ။
3 သန့်ရှင်းရေးနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ
ဤကိစ္စတွင် Eufy သည် လောင်းကြေးမရှိ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်ခြင်းမရှိ၊ မဝံ့မရဲဖြစ်နေပါသည်။... ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် မင်းရဲ့အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်တဲ့ စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်ကိုတွေ့ဖို့ ခက်ပါတယ်၊ တကယ်တော့ သူတို့အားလုံးဟာ အတူတူပါပဲ၊ ငါနားလည်ပါတယ် ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းသည် အလွန်အသုံးဝင်သောကြောင့် တစ်မီလီမီတာကို ပြောင်းလဲခြင်းသည် ဖြေရှင်းချက်ထက် ပြဿနာများကို ပိုမိုသယ်ဆောင်လာနိုင်သည်။ အဲဒါကြောင့်ပါ။ ဤစက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်သည် စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သော အခြားသုံးသန်းနှင့်တူသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏ hardware ၏ အပြင်အဆင်နှင့် ၎င်း၏ ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးကို အာရုံစိုက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
သင်ဒါကိုကြိုက်လား? Amazon တွင် ယူရို 299,99 ဖြင့်သာ ဝယ်ယူပါ။
အဆိုပါကိရိယာသည် အချင်း 32 စင်တီမီတာရှိပြီး အံ့သြစရာအကောင်းဆုံးမှာ ၎င်းသည် အထူ 7,2 စင်တီမီတာသာရှိသည်။ Eufy သည် ကျွန်ုပ်တို့ အတည်ပြုသည့် အရာတစ်ခုဖြစ်သည့် အတော်လေးပါးလွှာသော စက်ကိရိယာကို ရင်ဆိုင်ရကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား သတိပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ အပေါ်ပိုင်းကို ဖန်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး လက်ဗွေရာများအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော်လည်း သန့်ရှင်းရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ အခြားအမှတ်တံဆိပ်များဝတ်ဆင်လေ့ရှိသော "jet black" ထက် ပိုမိုနှစ်သက်သည့်အရာဖြစ်ပြီး ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင် တာရှည်ခံခြင်းမရှိပါ။ အလေးချိန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ အတိအကျ ကိန်းဂဏန်းတွေ မရှိပါဘူး၊ အိတ်ကပ်ထဲ ထည့်ထားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထည့်တွက်ရင် စကေးပေါ်မှာ ထားဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ မယူဆထားပါဘူး။ bucket eye ကောင်းတယ်။ တော်တော်ပေါ့ပါးတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ငါတို့သည် Eufy RoboVac G20 Hybrid ၏အောက်ခံအခြေခံအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အတော်လေးရိုးရာအစီအစဉ်၊ ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဆီလီကွန်နဲ့ နိုင်လွန်အမွေးအမှင်တို့ ရောစပ်ထားတဲ့ အလယ်တံမြက်စည်းနဲ့ပါ။3စင်တီမီတာဝန်းကျင်ရှိ အတားအဆီးများကို ကျော်လွှားနိုင်စေရန် ကူရှင်ဘီးနှစ်ခုဖြင့် လှည့်ပတ်ကာ စက်ပစ္စည်းကို ဦးဆောင်သည့် အဆုံးမရှိသောဘီးနှင့် တစ်ဖက်တည်းသော စုတ်တံတစ်ခုတို့ ပါဝင်ပါသည်။
နောက်ဘက်အဘို့ အညစ်အကြေးကန်၊ အထက်ဖော်ပြပါတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်မည့် ရေကန်၊ နှင့် Velcro နှင့် ကပ်နေသော စုတ်တံ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဤထုတ်ကုန်အမျိုးအစားတွင် မကြာသေးမီက မတွေ့ရသေးဘဲ၊ အထူးသဖြင့် ၎င်းကို အချိန်အကြာကြီးအသုံးမပြုရန် စီစဉ်နေပါက ကျွန်ုပ်တို့တွင် ON/OFF ခလုတ်တစ်ခုရှိသည်၊ အထူးသဖြင့် ၎င်းကို အချိန်အကြာကြီးအသုံးမပြုရန် စီစဉ်နေပါက၊ Eufy ကောင်းစွာ ထောက်ပြပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အထက်ပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ငါတို့မှာ tempered glass base ရှိတယ်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ခလုတ်တစ်ခုနှင့် WiFi ချိတ်ဆက်မှု LED အချက်ပြချက်တစ်ခု၊ ထူးထူးခြားခြား ဘာမှမရှိပါ။
နည်းပညာအပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ရှိတယ်။ ဝိုင်ဖိုင်ဆက်သွယ်မှု ကျွန်ုပ်တို့၏ RoboVac G20 Hybrid ကို Eufy အက်ပ်နှင့် တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်၊ နှစ်မျိုးလုံးရနိုင်သည်။ iOS ကို နှင့် အန်းဒရွိုက် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် လမ်းညွှန်မှုအတွက် gyro အာရုံခံကိရိယာလည်း ရှိပြီး မတူညီသော အမြင့်များတွင် မျက်နှာပြင်များပေါ် မပြုတ်ကျစေရန် စက်ရုပ်ကို အာရုံစိုက်သည့် အာရုံခံကိရိယာများ စီးရီးများ ရှိပါသည်။ Suction Power ၏ စည်းကမ်းချက်များမှာလည်း အလားတူပင်ဖြစ်သည်။ 1.500 နှင့် 2.500 Pa အကြား တုန်လှုပ်သွားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်အရ၊ မျက်နှာပြင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့် အပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ပေးအပ်ထားသော ပါဝါ။
စက်ရုပ်ကို တစ်ပြိုင်နက် ချိန်ကိုက်ပြီးပါပြီ။ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ Eufy Home သည် suction mode လေးခုနှင့် "scrubbing" mode တို့ကြားတွင် ပြောင်းလဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းတွင် လေဆာလမ်းကြောင်းပြစနစ်မရှိသော်လည်း၊ Smart Dynamic Navigation ဟုခေါ်သောစနစ်အား အသုံးပြုထားသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် ကျပန်းစနစ်အစား မျဉ်းပြိုင်လိုင်းများကိုအသုံးပြုကာ သန့်ရှင်းရေးတွင် ပိုမိုတိကျပြီး ထိရောက်မှုရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့မှာ စနစ်တစ်ခုရှိတယ်။ ပွတ်တိုက်ပါ။ သစ်သားကြမ်းပြင်နှင့် ကြမ်းခင်းများအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော်လည်း ကြွေကြမ်းခင်းများတွင် "စိုစွတ်သောအမှတ်အသားများ" ကို ချန်ထားပေးသည့် စိုစွတ်သော ကြမ်းပြင်မှတဆင့်။
အများဆုံးထုတ်လွှတ်သောဆူညံသံမှာ 55dB ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏စုတ်ယူနိုင်စွမ်းနှင့် စက်၏အထူကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမှာ ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Eufy ၏ အဆောက်အအုံတစ်ခုသည် သတိမပြုမိသော အသံတိတ်စက်ရုပ်တစ်ရုပ်ပေါ်တွင် လောင်းကြေးထပ်ရန် အတိအကျဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းနှင့် ထပ်တူပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုရပါမည်။ Alexa အပလီကေးရှင်းဖြင့် လျှင်မြန်စွာ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည့်အခါတိုင်း။
အစက်အပြောက် သန့်ရှင်းရေး (စက်ဝိုင်း)
ယင်းကြောင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အနိမ့်ဆုံးစုပ်ယူမှု၏ အသံတိတ်မုဒ်ဖြင့် ပေးဆောင်သည့် မိနစ် 120 ကြားတွင် သွားလာနေပါမည်။ စံမုဒ်တွင် မိနစ် 70 ကြာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ ၎င်းကို အများဆုံးစုတ်ယူသည့်မုဒ်သို့ သတ်မှတ်ပါက ခန့်မှန်းခြေ 35 မိနစ်။
ဤအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်အမင်းတိတ်ဆိတ်ပြီး ကျစ်လျစ်သော အဓိကအားဖြင့် ထင်ရှားသည့် ဘက်စုံသုံး စက်ရုပ်တစ်ရုပ်နှင့် ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိသည်။ အခြားဟန်ဆောင်မှုများနှင့် ဝေးကွာပြီး ၎င်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိုးဖောက်ခြင်းမပြုဘဲ လုပ်ဆောင်ရန် ကန့်သတ်ထားသည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည် လုံလောက်ပြီး အထူးသဖြင့် ကိရိယာ၏အတိုင်းအတာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် စုပ်ယူနိုင်စွမ်းသည် မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသည်။
အပလီကေးရှင်းတွင် စက်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် ကိုက်ညီသည့် အကန့်အသတ်ရှိသော လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများ ဆက်တိုက်ပါရှိသည်။ ဧကန်မုချဆုံကြ စပိန်တွင် တစ်ခါရောင်းသည့်စျေးနှုန်းအတွက် အလယ်အလတ်တန်းစားအတွင်း အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခု မတိုင်မီက ယူရို ၃၀၀၊ ၎င်းထံမှ တိုက်ရိုက်ရရှိနိုင်သော်လည်း၊ teufy အွန်လိုင်းစတိုး. တစ်ဖန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုစွမ်းဆောင်နိုင်သော စျေးနှုန်းဖြင့် စက်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရကျိုးနပ်မည်လား သို့မဟုတ် လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ကြာရှည်ခံမှုကို အာမခံသည့် အသိအမှတ်ပြုထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် လောင်းကြေးထပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအတောအတွင်း ဤ Eufy RoboVac Hybrid G20 ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သန့်ရှင်းရေး၊ စုပ်ယူမှု၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် ဆူညံသံ အတွေ့အကြုံသည် ကောင်းမွန်ပါသည်။
အပေါ်တင်ခဲ့သည်: မတ်လ 15 2022
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက်: မတ်လ 15 2022
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Eufy RoboVac G20 Hybrid သတိပညာနှင့် ထိရောက်သော သန့်ရှင်းရေး [သုံးသပ်ချက်]
Tronsmart သည် ပါတီများအတွက် ရက်ရက်စက်စက် ခရီးဆောင်စပီကာ Bang 60W ကို တင်ဆက်သည်။